အလုပ်အကိုင်အ application များအတွက်အဖုံးစာတစ်စောင်ရေးထား | USAHello
အလုပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုအဖုံးစာတစ်စောင် Creating အရေးကြီးပါတယ်. ဒါဟာသင်အလုပ်ကောင်းအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. ဖတ်7သင်တစ်ဦးအကြီးအဖုံးစာတစ်စောင်ရေးဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအကြံပေးချက်များ.
တစ်ဖုံးစာကိုရေးသားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါ. အဆိုပါဖုံးစာတစ်စောင်သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. ဒီမှာပါ7အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုအကြံပေးချက်များ.
အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများအတွက်အဖုံးအက္ခရာအချို့တူညီစာလုံးအရွယ်အစားနှင့်စတိုင်ရှိသင့်. အဆိုပါမာဂျင် (စာမျက်နှာ၏ဘက်မှာနေရာများ) အရမ်းတူဖြစ်သင့်. သင်ရုံကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏ထိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြတ် paste နိုင်ပါတယ် (header ကို) သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုလည်းပါဝင်သည်.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၌ရှိသကဲ့သို့အတိအကျတူညီစကားလုံးများကိုမသုံးပါနဲ့. ဤသည်အလုပ်ရှင်များအဘို့အဖတ်ရှုဖို့ boring နိုင်ပါသည်. အစား, တစ်ခုအောင်မြင်မှုအကြောင်းပုံပြင်ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအသေးစိတ်ပြောပြ. ဥပမာတစ်ခုသင်သည်သင်၏ဟောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစာရင်းကိုင်ခဲ့ပါကပြောပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်တစ်ဦးကျည်ဆံပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးစာရင်းကိုင်အမှား fixed နှင့်ကုမ္ပဏီပိုက်ဆံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ထိုအချိန်ကာလအကြောင်းပုံပြင်ကိုပြောပြဖို့ရွေးချယ်နိုင်.
ဘယ်သူမှအလုပ်ဖော်ပြချက်၌ရေးထားသမျှသောတိုင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်. သငျသညျရှိပါက 80%, သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးသမ္မတလောင်းများမှာ. သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်မှုချို့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဘယ်တော့မှမ. အစား, သင့်ရဲ့အချိန်အကောင်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပေါ်အာရုံစူးစိုက်.
အလုပ်ရှင်သင်အမှန်တကယ်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်ချင်ကြောင်းခံစားရကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်. သင်ရုံအွန်လိုင်းအနေအထားကိုတွေ့လိုလျှင်, သူတို့ရဲ့ website သို့သွားပါ. သည် "အကြောင်းကို" အပိုင်း Read နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ. သူတို့၏ "မစ်ရှင်နှင့်ရူပါရုံကို" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ. ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရန်အရေးကြီးပါသည်အကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်. ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုထွက် Pick နှင့်ဖုံးအက္ခရာ၏အဆုံးမှာဖော်ပြထားခြင်း.
နိုင်ငံအများအပြားတန်ဖိုးကိုတစ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း. သို့သော်, ယူအက်စ်အေတစ်ဦးတစ်သီးတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအမေရိကန်အလုပ်ရှင်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့တိကျတဲ့အားသာချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားမထောင်ချင်ဆိုလိုတယ်. အလုပ်ရှင်အထင်ကြီးဖို့ "ငါ" အစား "ငါတို့" ၏စကားလုံးကိုသုံးပါ. ဒါဟာခက်ခဲခံစားရပေမည်ပေမယ့်အလေ့အကျင့်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာအဘို့သင့်အဖုံးစာတစ်စောင်အပေါ်ကုမ္ပဏီအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သိရန်သည်ကောင်းသောအရာတစျခုမှာငှားရမ်းမန်နေဂျာရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်. တခါတလေ, ဒါကြောင့်အလုပ်ဖော်ပြချက်အပေါ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား. အကယ်. မရ, ကုမ္ပဏီပေါ်တက်ကြည့်ရှု LinkedIn တို့, အလုပ်အကိုင်အကွန်ရက်များအတွက် site တစ်ခုဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုတှေ့ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်၌ထည့်သွင်း. ဒါဟာသင်အသေးစိတ်အာရုံစိုက်သောအလုပ်ရှင်ပြအပိုအလုပ်ပွုပါမညျ.
များစွာသောလူသင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လျှောက်ထားကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအဖုံးစာတစ်စောင်သင့်ကိုထူးခြားစေအဘယ်သို့ဆိုရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းကိုကူညီနိုင်ပုံကိုအကြောင်းပြောဆိုသင့်တယ်. ဥပမာ, တစ်ဦးလူဝင်မှုအဖြစ်, သင်သည်အခြားဘာသာစကားမပြောတတ်. ကုမ္ပဏီအများအပြားသည်အခြားနိုင်ငံများရှိကွဲပြားခြားနားန်ထမ်းသို့မဟုတ်ရုံးခွဲများရှိသည်ကြောင့်ဤသည်ကအရေးကြီးတယ်. သင်တို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းခဲ့ကြပေမည်. ဒီဖော်ပြရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျအကောင်းအဖုံးအက္ခရာများ၏ဥပမာကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်တခု Entry-level ကိုအလုပ်အဘို့နမူနာစာတစ်စောင်နှင့်နမူနာစာတစ်စောင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုကိုက်ညီဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌နှစ်ဦးစလုံးအက္ခရာ၏ဥပမာကို download လုပ်ပါနှင့်သူတို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မည်.